July 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 22-12-1442…
Wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku waramaya in qarax xoogan lagu weeraray xillibaan katirsan baarlamaanka maamulka Hir Shabeelle. Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka maamulka Hir Shabeelle Xuseen…
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa sabti, Taariikhda hijriguna…
Aqoonyahan Maxmuud Ugaas oo kamid ah Aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ka faallooda arimaha caalamka Islaamka ayaa si qota dheer wuxuu u akhriyay maqaalaadka ay warbaahinta reer galbeedku ka qoreen dagaalka wadanka Afqaanistaan. Aqooyahanka…
Wararka ka imanaya wadanka Tuunis waxay ku waramayaan in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee wadankaas ay gacanta ku dhigeen xillibaano katirsan baarlamaanka uu howshoodu hakiyay madaxweynaha Tuunis Qeys Siciid. Xillibaan…
Xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka jira fasahaad xargaha goostay kaasoo gaaray heer ay ka qeyla dhaamiyaan saraakiisha ciidamada Dowladda federaalka ee ay howshoodu tahay ilaalinta anshax xumadaas. Taliye Zakiyo oo katirsan…
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weeraro xoogan ka fuliyeen saldhigyo ciidamada Kenya ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose. Deegaanka Cabdalla biroole oo dhaca duleedka magaalada Kismaayo ayay…
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Sabti Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
cusmaan	 Jul 30, 2021 0